နိုင်ငံတကာ သုတေသီများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုပ္ပါးမီးငြိမ်းတောင် အနီးတစ်ဝိုက်မှာ ရှားပါးမျောက်မျိုးစိတ်အသစ်တစ်မျိုးတွေ့ရှိခဲ့ – Maythadin
နိုင်ငံတကာ သုတေသီများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုပ္ပါးမီးငြိမ်းတောင် အနီးတစ်ဝိုက်မှာ ရှားပါးမျောက်မျိုးစိတ်အသစ်တစ်မျိုးတွေ့ရှိခဲ့
May Thadin | November 15, 2020 | News | No Comments
မြန်မာနိုင်ငံ ပုပ္ပါးတောင်ရှိမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားဖူးနေရာမှာ တကယ့်ကိုအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ မျောက် မျိုးစိတ်အသစ်တစ်မျိုးကို သိပ္ပံပညာရှင်များကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသ ပုပ္ပါးမီးငြိမ်းတောင်မှာနေထိုင်တဲ့ ပုပ္ပါး ?????? အမည်ရှိမျောက် မျိုးစိတ်အသစ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ မျောက်မျိုးစိတ်ပေါင်း ??? ထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက နိုင်ငံတကာသုတေသီများအဖွဲ့ဟာ အဆိုပါနှစ်ပေါင်း
??? ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပုပ္ပါးမျောက်ရဲ့နမူနာကို လန်ဒန်သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်မှာ ပြသထားခဲ့ဖူးပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်ကနမူနာကိုပြန်လည်ရယူကာ မျောက်ရဲ့အရေပြားနှင့် ဦးခေါင်းခွံကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး မျိုးရိုးဗီဇ နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ မျိုးစိတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တစ်ထပ်တည်းတူညီနေကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။နောက်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခုအရ တစ်ချိန်က မျိုးစိတ်တစ်ခုတည်းဟု
သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့မျောက်အုပ်စုတစ်စုဟာ အမှန်တကယ်တော့ မျိုးစိတ်သုံးခုရှိကြောင်းကို သိပ္ပံဂျာနယ်သတ္တဗေဒသုတေသနက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မျိုးစိတ်အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းက ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဆိုပေမဲ့ သူတို့အား ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွေမပြုလုပ်ပါက အဆိုပါမျောက် မျိုးစိတ်အသစ်များသက်တမ်းတိုနိုင်ကြောင်း ?????? ??????? ?????? ပြတိုက်ရှိနို့တိုက်သတ္တဝါများကိုကြီးကြပ်သူ
??????? ??????? ?????? ကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးစိတ်အသစ်က အလွန်နည်းပါးတဲ့အတွက်ကြောင့် မျိုးသုဉ်းလွယ်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်းလည်း ဆိုထားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာက လူဦးရေထူထပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဆိုပါမျောက်မျိုးစိတ်တွေဟာရှင်သန်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများပြားကြောင်း သတင်းထောက်တစ်ဦးက ဆိုထားပါတယ်။
အခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်ကျက်စားရာနေရာများဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပါ ပုပ္ပါး ?????? မျောက်မျိုးစိတ်တွေအတွက် အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ကြောင်းလည်း နိုင်ငံတကာက မှတ်ယူထားကြပါတယ်။မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ပုပ္ပါးတောင်ဒေသနဲ့အဆိုပါအသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့ရှားပါးမျောက်မျိုးစိတ်လေးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နေလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံ ပုပ်ပါးတောငျရှိမွငျ့မွတျတဲ့ဘုရားဖူးနရောမှာ တကယျ့ကိုအံ့ဩဖှယျကောငျးတဲ့ မြောကျ မြိုးစိတျအသဈတဈမြိုးကို သိပ်ပံပညာရှငျမြားကတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။မန်တလေးတိုငျးဒသေ ပုပ်ပါးမီးငွိမျးတောငျမှာနထေိုငျတဲ့ ပုပ်ပါး ?????? အမညျရှိမြောကျ မြိုးစိတျအသဈဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တဲ့ မြောကျမြိုးစိတျပေါငျး ??? ထဲမှာ ပါဝငျနပေါတယျ။စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက နိုငျငံတကာသုတသေီမြားအဖှဲ့ဟာ အဆိုပါနှဈပေါငျး
??? ကြျောရှိပွီဖွဈတဲ့ပုပ်ပါးမြောကျရဲ့နမူနာကို လနျဒနျသဘာဝသမိုငျးပွတိုကျမှာ ပွသထားခဲ့ဖူးပါတယျ။လှနျခဲ့တဲ့ရာစုနှဈတဈခုကြျောကနမူနာကိုပွနျလညျရယူကာ မြောကျရဲ့အရပွေားနှငျ့ ဦးခေါငျးခှံကိုပွနျလညျဆနျးစဈပွီး မြိုးရိုးဗီဇ နှဈခုကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့တဲ့အခါ မြိုးစိတျနှငျ့ပတျသကျပွီး တဈထပျတညျးတူညီနကွေောငျးကိုလညျး တှရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ။နောကျမြိုးရိုးဗီဇဆိုငျရာလလေ့ာမှုတဈခုအရ တဈခြိနျက မြိုးစိတျတဈခုတညျးဟု
သတျမှတျခံထားရတဲ့မြောကျအုပျစုတဈစုဟာ အမှနျတကယျတော့ မြိုးစိတျသုံးခုရှိကွောငျးကို သိပ်ပံဂြာနယျသတ်တဗဒေသုတသေနက ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေဲ့ မြိုးစိတျအသဈရှာဖှတှေရှေိ့ခွငျးက ပြျောရှငျမှုတဈခုဆိုပမေဲ့ သူတို့အား ထိနျးသိမျးစောကျရှောကျရနျကွိုးပမျးမှုတှမေပွုလုပျပါက အဆိုပါမြောကျ မြိုးစိတျအသဈမြားသကျတမျးတိုနိုငျကွောငျး ?????? ??????? ?????? ပွတိုကျရှိနို့တိုကျသတ်တဝါမြားကိုကွီးကွပျသူ
??????? ??????? ?????? ကမှတျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။အဆိုပါမြိုးစိတျအသဈက အလှနျနညျးပါးတဲ့အတှကျကွောငျ့ မြိုးသုဉျးလှယျတဲ့အန်တရာယျရှိနိုငျကွောငျးလညျး ဆိုထားပါတယျ။ကြေးဇူးတငျစရာကောငျးတာက လူဦးရထေူထပျတဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့မွငျ့မွတျတဲ့နရောတဈဝိုကျမှာနထေိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ အဆိုပါမြောကျမြိုးစိတျတှဟောရှငျသနျဖို့ အခှငျ့အလမျး ပိုမိုမြားပွားကွောငျး သတငျးထောကျတဈဦးက ဆိုထားပါတယျ။
အခုလကျရှိ မွနျမာနိုငျငံ လငျြမွနျစှာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာတာနှငျ့အမြှ အမဲလိုကျခွငျးနှငျ့ကကျြစားရာနရောမြားဆုံးရှုံးခွငျးတို့ကွောငျ့ အဆိုပါ ပုပ်ပါး ?????? မြောကျမြိုးစိတျတှအေတှကျ အန်တရာယျကရြောကျနိုငျကွောငျးလညျး နိုငျငံတကာက မှတျယူထားကွပါတယျ။မွနျမာအစိုးရအနနေဲ့ ပုပ်ပါးတောငျဒသေနဲ့အဆိုပါအသဈတှရှေိ့ထားတဲ့ရှားပါးမြောကျမြိုးစိတျလေးတှကေို ကာကှယျနိုငျဖို့ ကွိုးပမျးအားထုတျမှုတဈခုပွုလုပျနလေိမျ့မယျလို့လညျး မြှျောလငျ့မိပါတယျ။
ဧရာဝတီစငျတာကို ပထမ မတညျငှေ သိနျး၁သောငျးခှဲကုနျတာနဲ့ ထပျမံ၍ သိနျး၅ထောငျ လှူ ဒါနျးတဲ့ ဦးဇျောဇျော
ရောဂါခံစားရမှုတွေဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့တဲ့ ဒုတိယလှိုင်းကိုဗစ်မှာ ​ပေါ့ပေါ့ဆဆနေကြသူများ သတိထားကြပါ​နော်